किन हुन्छ स्वप्नदोष ! के हो टेस्टोस्टेरोन ?
मानिस सबैले निदाएपछि सपना देख्ने गर्छन। सपना राम्रो नराम्रो दुवै किसिमका देखिन्छ । त्यसतै प्राय: सबैले किशोरअवस्थामा यौनसम्बन्धी गतिविधि भएको सपना देख्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । यौन सपनाका क्रममा स्वप्न दोष हुनसक्ने भए पनि यी दुवै फरक–फरक कुरा हुन् । सधैंजसो र सबैको स्वप्न दोष हुनैपर्छ भन्ने छैन । कतिपय बेला अर्धचेतन अवस्थामा लिंग उत्तेजना मात्र पनि हुनसक्छ ।